မီးကြိုးနဲ့ အင်ထရာနက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » မီးကြိုးနဲ့ အင်ထရာနက်
Posted by kai on Jul 5, 2011 in Computers & Technology, Know-How, DIY |5comments
ZyXEL PLA407 ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းလေး တွေ့မိလို အဲဒီအကြောင်း နည်းနည်း ပြောချင်လို့ပါ..။
အဲဒါက.. အိမ်က..မီးကြိုးပလပ်ပေါက်မှာ တပ်လိုက်ရင်.. အဲဒါကတဆင့် နက်ဝက်ချိပ်လို့ရတယ်ဆိုပါတယ်..။
သဘောက.. မီးကြိုးရှိရင်.. 200 Mbps အမြန်နှုန်းရှိတဲ့.. အင်ထရာနက် နက်ဝပ်ဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော..။
ဆာဗာထိုင်လိုက်ရင်.. ဒိုမိန်းနက်ဝပ်တခုလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့..။
အဲဒါကို မြန်မာပြည်မှာများ သုံးနေတဲ့သူရှိသလားလို့..။
ZyXEL PLA407 HomePlug AV 200 Mbps Powerline Wall-Plug Adapter (Starter Kit -2Units
– Plug-and-play design for quick boost of data transfer rates of up to 200 Mbps*
– Connects to powerline networks and provides power with extra power outlet
– Built-in Noise Filter for reducing power interference
– QoS supports high-definition video streaming and network applications
– Power-saving mode saves energy consumption
– Encrypt button for easy network security setup
– Multi-color LED identifies powerline network performance
*The theoretical maximum data transfer rate is 200 Mbps. The actual data transfer rate may vary depending on the quality of electrical installation.
ဒီမှာအဲဒါမျိုးသုံးတာတော့ မကြားမိပါဘူး (ရှိမရှိ မသိတာပါ)
ဂျီအက်အမ်နဲ့ (EDGE) အင်တာနက်သုံးဖို့လျှောက်လွှာတွေကိုတောင် ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က ပိတ်လိုက်တယ် ကြားပါတယ်
Information ရောက်တာ တော့ တနှစ်ကျော်ပြီ။ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးတာ တော့ မတွေ့ မိဘူး။
ဈေးကြောင့် လား နည်းပညာ ကြောင့် လားတော့ သေသေ ချာချာ မသိပါ။
အဲလိုသာသုံးလို့ရရင် ကောင်းမယ်.. ဟီး စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ ရတာပေါ့
Powerline Ethernet က Internet Network (Local Area Network) အတွက် သုံးတဲ့ Adopter တမျိုးပါ။
အိမ်တွင်း၊ ရုံးတွင်းမှာ Network Cable လိုင်းတွေထပ်ဆွဲစရာမလိုပဲ ရှိပြီးသား Electricity Circuit (အဆောက်ဦးအတွင်းမီးကြိုးများ)မှတဆင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Network ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
200Mbps နှုန်းအထိ အမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာ့ကြောင့်မတွင်ကျယ်သလဲဆိုတော့ စနစ်ကျတဲ့ အဆောက်အဦးအတွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုမှာ အခက်အခဲရှိလို့ပါ။ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုမှာ စနစ်တကျမရှိရင် Data Package တွေပျောက်ဆုံးတတ်တာကြောင့်
သိသလောက်က US$ 60 ၀န်းကျင်ဈေးရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် Cable Infrastructure လုပ်တဲ့ ဈေးနှုန်းပါထည့်တွက်ရင် အများကြီး ဈေးသက်သာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိသမျှ အဆောက်အဦးတွေအားလုံးမှာ Data Network Infrastructure ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု တော်တော်နည်းသေးတာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအတွက် နောက်မှလိုက်ပြီး Cable လိုက်ဆွဲတာများလို့ အသုံးမတွင်ကျယ်တာပါ။
တကယ်လို့များ အဲဒီလို Powerline Ethernet ကို သုံးမယ်ဆိုရင် Network Cable Infrastructure လုပ်တဲ့ Technician တွေတော့ ထမင်းငတ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေပါ။ IT လိုင်းထဲမှာ Cable Infrastructure Designer တွေအနေနဲ့ အလုပ်လာလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။